Date: 18 mai 2017 - 18:36
Mba mila toro-hevitra kely indray zfd: ny enregistrement-na bail commercial ve moa automatiquement à la charge du locataire ?
Dia ahoana ny hevitra mba afahana manena an'izy io (raha tsy diso aho, 2% du loyer à payer pendant toute la durée du bail, ce qui revient cher quand même) ? Raha ohatra ka hoe déclarer-na ambanibany, dia lasa tsy charge déductible zany, sa ahoana ny hevitra ?
Re: Enregistrement bail commercial
Par: izay ndrindra
Date: 19 mai 2017 - 07:59
Na mifanaraka @ tompon-trano de ahena ny facture. Na ahena ny terme ny contrat de somary mba maivamaivana kely le 2%.
Fa tsy déductible tokoa raha vao tsy enregistré, dia tsy maintsy à réintégrer dia lasa 20% amboniny @ IR
Date: 22 mai 2017 - 09:30
Misaotra betsaka anao namaly ô !